. W/Q: Mohamed Hussein Abdilahi
(Hadhwanaagnews) Thursday, January 10, 2019 22:16:23
Afka Ingiriisigu waa af caalami ah oo ay ku hadlaan waddamo badan oo dunida kamid ah. Waana af ay isku fahmaan inta badan wadamada dunidu maadaama oo waddan waliba uu leeyahay af u gaar ah marka laga reebo wadamo aan badnay oo afkani uu u yahay afkooda koowaad.
Erayga “English” waxa laga soo dheegay erayga “Anglisc” oo ahaa af ay ku hadli jireen mid kamid ah saddex qabiil oo Ingiriiska soo weeraray qarnigii 5aad waxaana la odhan jiray qabiilkaas “Angles”
Siduu kusoo bilaabmay afka Ingiriisigu?
In kabadan kumanaan sanno, waxa jiray dad qabaa’ilo ah oo kunoolaa dhul balaadhan oo ku yaalay
bariga wadanka turkiga. Dhammaan qabaa’iladaasi waxay ku hadli jireen afaf isku mid ah.
Qabaa’iladani waxay galeen oo ay u guureen meelo kuyaala bariga iyo galbeedka turkiga. Kuwii bariga u guurey waxay tageen Persia oo casrigan loo yaqaano “ Iraan” iyo Waddanka “Hindiya”. Afafkoodu waxay ku jaan go’naayeen afafka wadamada Iraan iyo Hindiya.
Dadkii u guurey galbeedka, afkoodu waxay ahaayeen kuwo ku jaan go’an inta badan afafka maanta ay ku hadlaan wadamada Yurub, sababtoo ah afka qabaa’iladani wuxuu u gudbay Yurub iyo Hindiya.
Asalka afkan waxa la odhan jiray “Indo-European” oo macno ahaan u dhaw in looga jeedo afkii ay wagaadi jireen Hindiya, Iraan iyo Yurub.
Waxaad ku arki kartaa “Indo- European” erayo badan oo oo aas aasi u ah af-Ingiriiska ,sida “ Mother”, “Father”, “ Brother”. Erayadani waa isku mid in badan oo kamid ah afafka Yurub , Hindiya iyo Iraan. Waxaana sabab u ah in ay isku mid noqdaan waxay kawada yimaadeen hal il (source),ama asal ahaan ayey meel kasoo wada jeedaan.
Afka ingiriisigu waa af jarmal ah!
Dad badani ma xaqiiqsana in afka ingiriisigu uu dhab ahaan la xidhiidh la leeyahay Af- Jarmalka. Waa af jarmal.
Laba kun oo sanno ka hor , Roomaaniyiintu waxay furteen oo ay qabsadeen jasiirad ku taala Ingiriiska waanay la wareegeen. Halkaas ayaana ay ku barwaaqaysnaayeen muddo ku dhaw afar boqol oo sanno ilaa iyo ay bilaabantay dhicitaankii boqortooyadii Roomaaniyiintu. Dhicitaanka boqortooyadaasi umay ahayn wakhti fiican dadkii ingiriiska ku noolaa, maxaa yeelay si deg deg ah waxay ka warheleen iyadow ku xeeranyhiin dad badan oo Jarmal ah oo kasoo guurey jasiiradii aynnu kor kusoo xusnay. Dadkan Jarmalka ahi waxay u muuqdeen kuwo nabdoon oo nabad gelyo muujinaya mararka qaarna ma ahayn sidaas. Waxaanay kasoo guureen waqooyiga Jarmalka.
Dadkani waxay ahaayeen qaabiilo, waxaana lagu magacaabi jiray “The Angles, The Soxons iyo “The Jutes”.
Muddo kadib,qabaa’iladan Jarmalka ahi waxay aas- aaseen todoba boqortooyo oo ay ka sameeyeen dhulka maanta loo yaqaano Ingiriis. Waxaana uu ahaa jasiirada koonfurta Ingiriiska( qaybta waqooyiga waxa maanta loo yaqaan Scotland, qaybta galbeedkuna waa Wales iyo Cornwall) .
Afka ay ku hadlaan dadkani ( Agles , Saxons iyo Jutes) waxa uu ahaa af- Ingiriiskii hore, mana fahmaysid haddaad maanta maqasho maadaama ay ahayd af ay ku hadlaan Jarmalkii hore. Ka hor, intii aanay soo gelin waddanka Ingiriiska, qabiiladan jarmalka ahi waxay barteen erayo Laatiin ah oo ay ka barteen dadkii Roomaaniyiinta ahaa oo ay is dhexgal la sameeyeen muddo boqolaal sanno ah. Waxaana maangal ah in aad ula yaabto erayo badan oo afka Ingiriiska ku jira oo laga bartay Roomaaniyiintii waddanka Ingiriiska yimid aan aad loo isticmaalin amaba aan tixgelin badan aanay ku lahayn afka- Ingiriiska.
Todobadii boqortooyo ee qabiiladii jarmalka ahaa kasameeyeen dhulkii Ingiriiska waxay ku noolaayeen si nabada, ka hor intii aanay dagaal lagelin “ Vikings” oo ahaa dad ka yimid Waddanka Dheenmaarki ( Denmark), kuwaasoo weeraray Qabaa’iladii Jarmalka ahaa bilaabayna in ay afka ingiriiska ku soo biiriyaan erayo af Dhaanish ah. Muddo kadib, waxa dhacay nasiib daro kale, markii gobol kamid ah faransiisku weeraray Ingiriiska.
Wakhtigaas waxa xukumayey Ingiriiska daciifka ah dad ku hadla afka Faransiiska. Afka faransiisku wuxuu ka noqday Ingiriiska af kujira meelaha sare.
Ugu danbeyntii, Ingiriisku wuxuu iska tuurey oo riday xukunkii dadkii xukumayey kadib khilaaf noocyo badnaa oo dhexmaray dadkaas xukumayey. Wakhti xaadirkan afka Ingiriiska waxa ku jira erayo ka yimid afafka Faransiiska iyo Dheenmarki.
Maadaama Ingiriisku yahay wadan haysta Diinta Kiristaanka. Erayada Laatiinka ah ee Kiniisada dhexdeeda laga isticmaalo waxa ka mid ahaa “ Ecclesiastical Latin” oo ka mid ah erayada lagu falanqeeyo afkaarta Kiristaanka. Sidoo kale waddanka Ingiriisku wuxuu ahaa waddan ganacsiga u fur furan, waxaana uu sii wadey qaadashada erayada ka yimid dhaqano kale, xataa afka Carbeed oo aynnu ka xusi kaarno erayada “ Orange” iyo “ Scarlet” oo labadaba loo tiiriyo in Af Carbeedka laga soo dheegay. Waxyaabo xiise leh ayaa dhacay markii Ingiriisku u furmay dunida kale islamarkaana ay yimaadeen erayo badan oo waddamo kale ka yimid. Markaas ayaana Afka Ingiriisku bilaabmay. Sidaa daraadeed, waa af- qaniya oo xiise leh, kana helayso erayo badan oo isku macne ah, balse xambaarsan dareen kala duwan. Taasina waxa ay ku xidhantahay meelaha ay asal ahaan ka yimaadeen.
Tusaale ahaan: Erayada kasoo jeeda Jarmalku waa kuwo muhiima oo waadaxa, balse waxa kasii heer sareeya kana xeeldheer erayada kasoo jeeda Laatiinka. Waxaynu tusaale usoo qaadan karnaa erayada “Go” wuxuu ka yimid Jarmal, Halka erayga “Depart” uu kasoo jeedo Laatiin. Labadan eray macnahoodu waa isku dhawyihiin, balse waxaad dareemaysaa in ay gudbinayaan dareen kala duwan.
Laatiin waxaynu uga jeednaa erayada kasoo jeedaa Roomaaniyiintii hore, sidoo kale waxa la yidhaa kuwa kasoo jeeda Giriiga (Greek).
Adna wax ku biiri.
Turjumaad aan kusameeyey qayb yar oo kamid ah buuga “Writing well (for the rest of us): No Grammar. No rules. Just common sense.
https://www.thoughtco.com › ... › English Grammar › Glossary of Key Terms